Non Nokwelukiweyo Bag Factory | Abenzi baseChina Abangenzi bezikhwama, Abathengi
Imikhiqizo Entsha Eshisayo China Sublimation Blank Non-Woven Shopping Bag
Sisebenzela ikusasa elingcono nomhlaba onobungane. Ngenxa yalokhu, sikhiqiza izikhwama ezinokuphinda zisebenze futhi eziyi-100. Izixazululo ezihamba phambili zezikhwama zokuthenga noma izikhwama ze-tote izikhwama ezingezona ezelukiwe, izikhwama ze-pp ezilukiwe, nezikhotini. Singumkhiqizi wesikhwama esingenalukiwe sokuthunga, izikhwama ze-ultrasonic ezingezona ezelukiwe, izikhwama zelukiweyo, izikhwama zikakotini, ama-s, nezikhwama ze-canvas ezisebenzisa njengesikhwama sokuthenga, izikhwama ze-eco-friendly, izikhwama zokuphromotha, isikhwama semakethe, kanye ne-tote izikhwama;
Ukuphrinta Kwesitolo esidayisa yonke impahla Ilogo China Advertising Shopping Pp Nonwoven Bag Black White Blue Non-woven Promotional Bags
Sizozinikela ekuhlinzekeni abathengi bethu abahlonishwayo ngezinsizakalo ezinomdlandla ezicatshangelwe kakhulu zezikhwama zokuphromotha ezingezona ezelukiwe, Samukela amaklayenti, izinhlangano zebhizinisi nabangane abaseduze bazo zonke izingxenye zomhlaba ukuze baxhumane nathi futhi bacele ukubambisana kwemivuzo yomunye nomunye.
Ifektri ye-Professional China Eco Nonwoven Bag, Sibheke phambili ekusebenzisaneni eduze nawe kuzinzuzo zethu sobabili kanye nentuthuko ephezulu. Ikhwalithi eqinisekisiwe, uma amakhasimende ebengagculisekile ngekhwalithi yemikhiqizo, ungabuya kungakapheli izinsuku eziyi-7 nezimo zawo zokuqala.
Umkhiqizi Wesikhwama Sokuthenga Esingavaliwe esivela eChina
OKWENZIWE NGUWE: Kulungele ukuphiwa izinkampani, isipho ngokuthenga, izipho zomshado, izinto zokwazisa, izinsuku zokuzalwa, izikhumbuzo kanye nokuningi.
ASIQALE NGOKUQALA KWAKHO: Yenza izinto zakho ngokwezifiso ziphrintwe nge-logo, noma yini enye okhetha ukuyiphrinta kuleyo nto. Uma ufuna ukufaka ilogo, thayipha "LOGO" ebhokisini elenziwa ngokwezifiso futhi sizoxhumana nawe ngemidwebo yakho.
Kwenziwe ngentando yezitolo tote ultrasonic PLA Non Nokwelukiweyo Bag
Ngokwezifiso Laminated Polypropylene Tote Bag PP Non Nokwelukiweyo Bag
Imikhiqizo yokuthengisa eshisayo i-laminated white non woven custom with print
Ukuphrinta kwe-logo yangokwezifiso i-PP enamathele ngokuthenga okungafaniyo
Isikhwama Nonwoven ingenye ethandwa kakhulu ukuthenga izikhwama emhlabeni wonke. Kuyintengo eshibhile, iyasebenziseka futhi ilungele ukwazisa ngomkhiqizo wakho. Izinketho ezahlukahlukene zobunjwa obuhlukile, umbala, ama-s, nesitayela.
Yenziwe ngendwangu engesiyo eyelukiwe (indwangu yenziwa nge-polypropylene, Spun-bond) Indwangu engalukiwe eyenziwe ngezinto ze-virgin pp okwenza isikhwama sihlale isikhathi eside. Ubukhulu bendwangu engalukiwe buvela ku-60gsm kuye ku-120gsm.
Ngokwezifiso Isitolo esidayisa yonke impahla izinga okusezingeni isikhwama ezimibalabala non ephothiwe indwangu isikhwama
Ngokwezifiso Ilogo Elanyatheliswa Fashion eshibhile Shopping Shopping laminated Laser Non Nokwelukiweyo Tote Bag
【Isivumelwano Sangempela】 Izikhwama Zefektri eziQinisekayo Eziqinile Ezingasetshenziswa, eshibhile kakhulu uma uqhathanisa neminye imikhiqizo. Usayizi omkhulu, omkhulu ngokwanele ukuthi ungapakisha noma yini oyifunayo. Izibambo eziphelele zokuthenga, ukudla, ukuhamba, ukugcina nokusebenziseka kwansuku zonke!
Kwenziwe ngentando eco-friendly ephrintiwe white pp non woven tote bag
Isikhwama esingesona eselukiwe esiningi siyindlela enhle yokubonisa umkhiqizo wakho noma njengesipho esihle sabathandekayo bakho.
Ukuphrinta kuyatholakala ezinhlangothini zombili. Ifaka ikhwalithi eco-friendly, elula futhi esebenzayo.
I-PP engalukiwe ayibizi futhi inikela ngekhwalithi ehlukile.
Isikhwama sokuthenga esenziwe ngentengo yokuthenga yezikhwama ezingezona ezelukiwe ngokuphrinta